तातो पानीले नुहाउने बानी छ ? यस्ता समस्या आईपर्न सक्छ - Aamsanchar
तातो पानीले नुहाउने बानी छ ? यस्ता समस्या आईपर्न सक्छ
जाडोमा धेरैबेरसम्म तातो पानीमा नुहाउँनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिदैन। तातोपानीले हाम्रो शरीर र दिमाग दुबैमा नराम्रो असर पार्छ। खासमा तातो पानीले केराटिन नामको स्किन सेल्सलाई ड्यामेज गर्ने गर्छ जसले त्वचा चिलाउने र रुखो बनाउँछ।
जाडोमा तातो पानीले नुहाउँदा राम्रो हुने हामीले धेरै सुनेका छौँ । तर के हामीले विचार गरेका छौँ कहिल्यै पनि कपाल तातो पानीले नुहाउनु हुँदैन । यदी तातोपानीले कपाल नुहाउने बानी परेको छ भने आजैबाट त्यो बानी हटाउनुहोस् ।
तातोपानीले कपाललाई निकै रुखो बनाउँछ। कपाल झर्ने टुक्रिने हुन्छ ।
अझ कतिपय मानिसको बानी हुन्छ कपालमा जे भेट्यो त्यसैको प्रयोग गर्ने । भनाइको तात्पर्य के हो भने कपालको लागि उपयोगी हुने स्याम्पु प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यस्तो क्रिया जाडोको लागि एकदमै उपयोगी कुरा हो । त्यसपछि सफा कपडा लगाएर केहिबेर शरीरको पछाडी भागमा घाम पारेर न्यानो बनाउन सकिन्छ । अनि घाम ताप्दै नङ सफा गरी काट्न सकिन्छ । कानको फोहोर निकाल्न सकिन्छ । तर दिउँसोको घाममा धेरैबेर बस्नु हुँदैन ।